यसरी बन्द हुन्छ मोबाइलको सिमकार्ड, अवधि बन्द हुनेबारे यस्तो छ नेपाल टेलिकमको नियम — Sanchar Kendra
यसरी बन्द हुन्छ मोबाइलको सिमकार्ड, अवधि बन्द हुनेबारे यस्तो छ नेपाल टेलिकमको नियम
के तपाइले पहिले फोन गरेको र सेभ गरेको नम्बरमा अहिले फोन गर्दा अरु कसैले फोन उठाएको पाउनुभएको छ ? अथवा तपाइलाई केही मान्छेहरुले अरु नै कोही भनेर फोन गरेका छन् ? यस्तो हुनसक्छ। यसो हुनुमा नम्बर गलत टिपोट गरेकै कारणमात्र नहुनसक्छ।
कसरी यस्तो हुन सक्छ?
कुनै पनि नम्बर आजभन्दा कम्तिमा एक वर्ष पहिले जसलाई फोन गर्न खोजिएको हुन्छ उसैसँग हुन्छ। तर उक्त व्यक्तीले त्यो सिममा ब्यालेन्स हाल्न छोडिदिनसक्छ अथवा नचलाइ राखिदिनसक्छ। त्यसरी छोड्दा सिमको अवधि सकियो। त्यसपछि त्यो सिम टेलिकम कम्पनीले अर्कै प्रयोगकर्तालाई दिएका हुन्छ। यसरी दिएपछि कैसैगरी त्यही पुरानो नम्बरमा जसलाई सम्पर्क गर्न खोजिएको हो त्योसँग सम्पर्क हुँदैन।
कुनै पनि पनि सिमकार्ड कुनै पनि प्रयोगकर्ताले बिन शर्त प्रयोग गर्न पाउँदैन। हामीले सिम किन्दा नै टेलिकम कम्पनीले केही शर्त तोकेको हुन्छ। त्यही आधारमा सिमको प्रयोग गर्ने वा आफूसँग अधिनमा रहने मिति तय हुन्छ। यसमा विभिन्न टेलिकम कम्पनीका आफ्नै नियम हुन्छन्।
सिमको प्रयोग गर्ने अवधि, स्वामित्वको निरन्तरताका त्यस्ता नियम फरक हुन्छन्। नेपाल टेलिकमका पनि आफ्नै नियम छन्। नेपाल टेलिकमले यस्ता नियमका बारेमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएको छ।
नेपाल टेलिकमका सिमकार्डको अवधि र स्वामित्वको निरन्तरताको एक मुख्य आधार भनेको ब्यालेन्स हो। कुनै पनि ग्राहकले सिम किन्नेवित्तिकै ८१४१४३ मा डायल बिकल्प छनौट गरेर सुरु गर्न सक्छन्। यसरी नयाँ सिम सक्रिय भएपछि १८० दिन अर्थात् ६ महिनासम्म अविच्छिन सञ्चालन हुन्छ। यो अवधिमा १ रुपैयाँ रिचार्ज नगरेपनि सिमको म्याद रहन्छ।
त्यसपछि भने सिम सक्रिय राख्नका लागि रिचार्ज गर्नुपर्छ। जसमा ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा ३० दिन, १०० रुपैयाँ गर्दा ६० दिन, ५०० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा एक वर्ष र हजार रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा दुई वर्ष सिमको आयु थपिन्छ। सिमकार्डमा एकरुपैयाँ पनि ब्यालेन्स नभएको र सिमको आयु पनि सकिएपछि पनि कल आउँछ। तर यस्तो समय ३० दिनमात्र हुन्छ।
३० दिनपछि पनि रिचार्ज नगरेको खण्डमा सिममा कल आउने र जाने सुविधा बन्द हुन्छ। यसरी सेवा बन्द भएपछि पनि सिमको स्वामित्व ३० दिनसम्म कायमै हुन्छ। सबै सेवा बन्द भएको ३० दिनभित्र पनि रिचार्ज नगरेपछि सिम फ्रोजन हुन्छ। यस्तो भएपमा सिममाथिको स्वामित्व पनि गुम्छ। यसरी स्वामित्व गुमेको नम्बर कम्पनीले अरु कसैलाई पनि दिनसक्छ।
कुनै सिमकार्डमा सञ्चित रकम भएतापनि सिम प्रयोग गर्न सकिनसक्छ। यस्तो भएमा उक्त सिमकार्ड दुईतर्फी सेवा बन्द हुन्छ। यसरी दुईतर्फी सेवा बन्द भएको सिमकार्ड ३० दिनभित्र रिचार्ज गरेपछि रकम पुरानोसमेत जोडिएर आउछ तर सिमको म्याद भने नयाँ रिचार्जअनुसारमात्र थपिन्छ।
सेवा प्रयोग गरेवापत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रकम उक्त मोबाइलको क्रेडिट लिमिटभन्दा बढी भएमा सेवा एकतर्फी (आगमन मात्र हुने, बाह्यगमन नहुने) हुन्छ । यस्तो एकतर्फी सेवा ९० दिनसम्म रहन सक्दछ र सिम एकतर्फी भएको अर्को महिनादेखि बिल उठ्दैन ।
नब्बे दिनसम्म पनि क्यौता भुक्तानि गरिएन भने दुईतर्फी (आगमन र बाह्यगमन) सेवा बन्द हुन्छ र सिम फ्रोजनमा जान्छ। फ्रोजनमा रहेको ९० दिनभित्रमै सेवा सुचारु गर्न बाँकी महशुल भुक्तानी गरी नजिकको दुरसञ्चार कार्यालयमा गई (वा फोन÷इमेलमार्फत) जानकारी गराउनु पर्छ ।यो अवधिमा भुक्तानी नगरेमा सिम टर्मिनेट हुन्छ।
यसरी टर्मिनेट भएको १८० दिनसम्म कम्पनीले सिमको स्वामित्व अर्कालाई दिंदैन। सिम रिसाइकल प्रक्रियामा जानका लागि १८० दिनको समय राखिएको हुन्छ। जब १८० दिन पार हुन्छ र योबीचमा सम्बन्धित ग्राहकले क्लेम गरेमा तोकिएको शुल्क तिरेर त्यही नम्बर लिने सुविधा हुन्छ। तर १८० दिनभित्र पनि सिम नलिएको खण्डमा कम्पनीले त्यो सिमलाई रिसाइकलमा हाल्छ। जुनसुकै ग्राहकलाई दिनसक्छ।
विदेशबाट सेवा प्रयोग गर्न सकिने अवधि थप गर्नसकिन्छ विदेश जाँदा सँगै लिएको सिम चल्तीमा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि सिमको आयु थप्न सकिन्छ। टेलिकमले विदेशबाटै पनि विभिन्न माध्यमबाट रिचार्ज गरेर अवधि थप गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।